Ukusetshenziswa kwe-Power Ultrasound usebenzisa i-Ultrasonic Horn - Hielscher Ultrasound Technology
Izimpondo ze-Ultrasonic noma ama-probe asetshenziswa kabanzi ekusetshenzisweni kokuphindaphindwa ketshezi okubandakanya ukufaka i-homogenization, ukuhlakazeka, ukugaya okumanzi, ukumisa emulsification, ukukhipha, ukuhlakazeka, ukuncibilika, nokuqeda amandla. Funda izisekelo mayelana nezimpondo ze-ultrasonic, ama-probe e-ultrasonic kanye nokusetshenziswa kwazo.
Ultrasonic Uphondo vs Ultrasonic Probe
Imvamisa, igama elithi uphondo ne-probe ye-ultrasonic lisetshenziswa ngokungafani futhi libhekisa kunduku ye-ultrasonic ehambisa amagagasi e-ultrasound kuketshezi. Amanye amagama asetshenziselwa iphenyo le-ultrasonic uphondo lwe-acoustic, i-sonotrode, i-acoustic waveguide, noma umunwe we-ultrasonic. Kodwa-ke, ngokusemthethweni kukhona umehluko phakathi kophondo lwe-ultrasonic kanye ne-probe ye-ultrasonic.
Kokubili, uphondo ne-probe, kubhekisa ezingxenyeni ze-okuthiwa i-probe-type ultrasonicator. Uphondo lwe-ultrasonic luyingxenye yensimbi ye-transducer ye-ultrasonic, ethokoziswa ngokudlidlizela okwenziwe ngo-piezoelectrically. Uphondo lwe-ultrasonic ludlidliza ngemvamisa ethile, isb. 20kHz, okusho ukudlidliza okungama-20,000 ngomzuzwana. I-Titanium yinto ekhethwayo yokwenziwa kwezimpondo ze-ultrasonic ngenxa yezindawo zayo ezinhle kakhulu zokudlulisa i-acoustic, amandla ayo okuqina okukhathala, nobulukhuni bendawo.
Uphenyo lwe-ultrasonic lubizwa nangokuthi i-sonotrode noma umunwe we-ultrasonic. Iyinduku yensimbi, evame ukwenziwa nge-titanium, futhi ifakwa ophondweni lwe-ultrasonic. I-probe ye-ultrasonic iyingxenye ebalulekile yeprosesa ye-ultrasonic, ehambisa amagagasi e-ultrasound kwisidlali sonicated. Ama-ultrasonic probes / sonotrode asezimo ezahlukahlukene (isb. Eyindilinga, enamathiphu, enamathele, noma njengeCascatrode) etholakalayo. Ngenkathi i-titanium iyinto esetshenziswa kakhulu kuma-probe e-ultrasonic, kukhona ne-sonotrode eyenziwe ngensimbi engagqwali, i-ceramic, ingilazi nezinye izinto ezitholakalayo.
Njengoba uphondo lwe-ultrasonic kanye ne-probe kungaphansi kokucindezelwa okuqhubekayo noma ukungezwani ngesikhathi se-sonication, ukukhethwa kwempahla kophondo ne-probe kubalulekile. Ikhwalithi ephezulu ye-titanium alloy (ibanga lesi-5) ithathwa njengensimbi ethembeke kunazo zonke, ehlala isikhathi eside futhi esebenzayo ukumelana nengcindezi, ukugcina ama-amplope aphezulu isikhathi eside, nokudlulisa izakhiwo ze-acoustical and mechanical.
transducer ultrasonic I-UIP2000hdT ngophondo lwe-ultrasonic, i-booster, ne-probe (sonotrode)
Ama-ultrasonicators asebenza kahle kakhulu asebenza ebangeni lemvamisa lama-20-30kHz. Ku-20 kHz, iphenyo le-ultrasonic imvamisa iyinduku ende yesigcini eside, ehlala ikhula futhi ingena izinkontileka izikhathi ezingama-20 000 ngomzuzwana. Ukunyakaza nokwenyuka kokuncipha kudluliselwa njenge-ultrasound enamandla amakhulu kunqubo yenqubo, okusho uketshezi noma udaka, ukuze kufezeke izinhlelo ezinjenge
ukuxubana okuphezulu kwe-shear
ukusabalalisa kwe-ultrasonic kwama-nano-particles
ukuphazamiseka kwamaseli e-ultrasonic kanye ne-lysis
i-ultrasonic degassing ne-de-aeration
i-sono-chemistry (i-sono-synthesis, i-sono-catalysis)
Isebenza kanjani i-Power Ultrasound? – Isimiso Esisebenzayo se-Acoustic Cavitation
Ngokusebenza okuphezulu kwe-ultrasonic okufana ne-homogenization, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana, ukwehla noma i-nano-dispersions, amandla amakhulu, imvamisa ye-ultrasound yenziwa nge-ultrasound transducer futhi idluliswa ngophondo lwe-ultrasonic kanye ne-probe (sonotrode) ibe uketshezi. I-high-power ultrasound ibhekwa njenge-ultrasound ebangeni le-16-30kHz. Uphenyo lwe-ultrasound luyanwebeka nezinkontileka isib., Ku-20kHz, ngaleyo ndlela kudluliswe ukudlidliza okungama-20,000 ngomzuzwana kulowo ophakathi. Lapho amagagasi e-ultrasonic edabula kuketshezi, kushintshana ukucindezela okuphezulu (ukucindezela) / ingcindezi ephansi (i-rarefaction / ukunwetshwa) imijikelezo idala izimbotshana zemizuzu (ama-vacuum bubbles), akhula ngaphezu kwemijikelezo yengcindezi eminingana. Ngesikhathi sesigaba sokucindezelwa ketshezi namabhamuza, ingcindezi ivuma, kuyilapho isigaba se-rarefaction sikhiqiza i-vacuum (ingcindezi engemihle. Ngesikhathi semijikelezo yokwanda kokucindezela, izimbotshana ezikulolu ketshezi zikhula zize zifinyelele usayizi, lapho zingakwazi khona ukumunca amandla. Ngalesi sikhathi, bahamba ngamandla. Ukufakwa kwalezi zimbobo kuholela emiphumeleni ehlukahlukene enamandla, eyaziwa ngokuthi yinto ye-acoustic / ultrasonic cavitation. I-acoustic cavitation ibonakala ngemiphumela eminingi enamandla kakhulu, ethinta uketshezi, izinhlelo eziqinile / eziwuketshezi kanye nezinhlelo zegesi / uketshezi. Indawo yamandla aminyene noma indawo yokubamba iqhaza yaziwa njengendawo ebizwa ngokuthi indawo eshisayo, enamandla kakhulu endaweni eseduze ne-probe ye-ultrasonic futhi yehla ngamabanga akhulayo ukusuka ku-sonotrode. Izici eziyinhloko ze-cavitation ye-ultrasonic zifaka phakathi amazinga okushisa aphakeme kakhulu nezingcindezi kanye nokwehluka okuhlukile, iziphithiphithi nokusakazwa ketshezi. Ngesikhathi sokufakwa kwezikhala ze-ultrasonic ezindaweni ezishisayo ze-ultrasonic, amazinga okushisa afinyelela ku-5000 Kelvin, izingcindezi ezingafika kuma-200 atmospheres namajets wamanzi anama-1000km / h angalinganiswa. Lezi zimo ezivelele ezinamandla amakhulu zifaka isandla emiphumeleni ye-sonomechanical ne-sonochemical eqinisa izinqubo nokuphendula kwamakhemikhali ngezindlela ezahlukahlukene.
Umthelela omkhulu we-ultrasonication kuziphuzo nakuma-slurries yilokhu okulandelayo:
Ukushefa okuphezulu: Amandla we-Ultrasonic high-shear aphazamisa uketshezi nezinhlelo eziqinile zamanzi ezibangela ukuphazamiseka okukhulu, i-homogenization nokudluliswa okukhulu.
Umthelela: Izindiza zamanzi nokusakazwa okwenziwe yi-ultrasonic cavitation kusheshisa okuqinile kuketshezi, okuholela ekushayaneni kwe-interparticluar. Lapho izinhlayiya zishayisana ngejubane eliphakeme kakhulu, ziyakhukhula, zichitheke bese zigaywa futhi zihlakazeke kahle, ngokuvamile ziye phansi kusayizi we-nano. Okwezinto zebhayoloji njengezinto zokutshala, amajetshi aphezulu e-velocity liquid nemijikelezo yokushintshanisa eshintshashintshayo iphazamisa izindonga zeseli futhi ikhulule okokusebenza kwamaseli. Lokhu kuphumela ekukhishweni okusebenza kahle kakhulu kwamakhemikhali e-bioactive kanye nokuxubana okufanayo kwendaba yezinto eziphilayo.
Ukuyaluza: I-Ultrasonication ibangela ukuqubuka okukhulu, amandla we-shear kanye nokuhamba okuncane kuketshezi noma kudaka. Ngaleyo ndlela, i-sonication iqinisa njalo ukudluliswa kwabantu futhi isheshise ukusabela nezinqubo.
Ama-homogenizers e-Ultrasonic kanye ne-mixers ephezulu ye-shear asetshenziswa cishe kunoma iyiphi imboni yokucubungula, esebenza ngeziphuzo noma ama-slurries. Amandla amakhulu e-ultrasonic cavitational adala ukuthuthuka okukhulu, ukugunda, ukuphuka kwezinhlayiyana nokudluliswa okukhulu. Ngaleyo ndlela, oketshezi kwenziwa ngehomogenized, kuhlakazeka, kukhishwe emulsified, kukhishwe, kuncibilike kanye / noma ukuphendula kwamakhemikhali kuyaqalwa. Sekukonke, i-ultrasonication iyindlela yokuqinisa inqubo ekhulisa isivuno, ithuthukise amazinga wokuguqulwa futhi yenze izinqubo zisebenze kangcono.
Izicelo ezijwayelekile ze-ultrasonic embonini zisatshalaliswa emagatsheni amaningi okudla & i-pharma, i-chemistry enhle, amandla & i-petrochemistry, i-recycling, i-biorefineries, njll. futhi kufaka okulandelayo:
i-ultrasonic biodiesel synthesis
i-homogenization ye-ultrasonic yeziphuzo zezithelo
ukukhiqizwa kwe-ultrasonic kwemigomo
i-ultrasonic Li-ion kabusha ibhethri
ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic kwe-nano-materials
Ukwenziwa kwe-Ultrasonic Kwemithi
i-ultrasonic nano-emulsification ye-CBD
Isizinda se-ultrasonic se-botanicals
Ukulungiselela isampula kwe-ultrasonic kuma laboratories
i-ultrasonic degasification yeziphuzo
ukukhishwa kwe-ultrasonic kokungahluziwe
Izimpondo ze-Ultrasonic kanye nama-Probes wezinhlelo zokusebenza eziphezulu
I-Hielscher Ultrasonics ingumkhiqizi wesipiliyoni sesikhathi eside nomsabalalisi wama-ultrasonicators anamandla amakhulu, asetshenziswa umhlaba wonke ekusetshenzisweni kwemisebenzi esindayo ezimbonini eziningi.
Ngama-processor we-ultrasonic asayizi wonke kusuka kuma-watts angama-50 kuye kwangama-16kW ngedivayisi ngayinye, ama-probe osayizi nobukhulu obuhlukahlukene, ama-reactors e-ultrasonic anamavolumu namajometri ahlukahlukene, i-Hielscher Ultrasonics inezinto ezifanele ukumisa ukusethwa okuhle kwe-ultrasonic kohlelo lwakho lokusebenza.
Ultrasonic Pectin Extraction kusuka kwiZithelo ne-Bio-Waste
Amadivaysi e-ultrasonic wokucubungula kwe-Liquid